Hay'adda Taageerada Degaanka ee Degaanka
Hay'adda Taageerada Degaanka ee Degaanka (LISC) waa urur qaran oo leh diiradda bulshada. LISC waxay xafiisyo ku leedahay 30 magaalo oo kuyaal dalka oo dhan, oo ay ku jiraan Twin Cities iyo Duluth, waxayna u heellan yihiin inay caawiyaan dadka deegaanka si loo bedelo xaafadaha dhibta leh ee ku jira bulshooyinka caafimaadka leh, waaya-aragnimo iyo fursad. Waxay higsanayaan hadafkan iyada oo la abaabulayo qaybaha shirkadaha, xukuumadda, iyo deeq-bixiyeyaasha si ay u siiyaan ururrada horumarinta beesha maxalliga leh deymaha, deeqaha, taageerada siyaasadda, iyo gargaarka farsamada iyo maamulka.
Barnaamijka McKnight ee Barnaamijka Gobollada & Bulshadu wuxuu kor u qaadaa xaafadaha dhaqaale ee firfircoon ee abuura fursado iyo bixinta nidaam isku dhafan oo taageero ah. LISC ayaa hadda heleysa maalgalin mashruuc oo lagu dhisayo beelaha waara ee degaanka Twin Cities, iyo sidoo kale barnaamijka iyo taageerada u shaqeynta si loo hirgeliyo hannaanka isku dhafan ee Duluth LISC iyo istaraatijiyadaha dhaqaalaha bulshada.
LISC waxay riixeysaa saameynta horumarinta beesha ee ka baxsan horumarinta jirka.
LISC waxay riixeysaa saameynta horumarinta beesha ee ka baxsan horumarinta jirka. Deeqaha COACTION waxay bixiyaan dhaqaale hawlgalo Twin Cities nonprofits kuwaas oo ka shaqeynaya oo kaliya si loo hagaajiyo muuqaalka xaafadda, laakiin sidoo kale aragti dhaqaale ee dadka deggan. COACTION wuxuu taageertaa ururrada ku salaysan bulshada iyo iskaashiyada kuwaas oo horumarinaya mulkiilaha hantida maguuraanka ah iyo mashruucyada horumarinta ganacsiga yaryar oo keenaya tayada hagaajinta nolosha.
EMERGE Horumarinta Bulshada, oo ah horumariye ganacsi oo ku yaal waqooyiga Minneapolis, waa mid ka mid ah deeq bixiyayaasha LISC ee LISC. EMERGE waxay si wadajir ah u samaysay Camden Apartments, oo ah 23 mashruuc guriyeyn oo taageera kuwaas oo bixiya adeegyo badan oo caawiya dadka degan mar labaad, oo ay ku jiraan maareynta kiisaska qoysaska iyo barnaamijka shaqaale ee bixiya adeegyo shaqo iyo adeegyo taageero dadka shaqo doonka ah. LISC waxay aaminsan tahay qaabkan horumarinta bulshada ee isku dhafan, oo ah fure u ah caawinta qoysaska adag ee xagjirka ah iyo xaafadaha soo koraya.